Ekufeni Kwimihla yokuBulala kweNdodakazi yakhe
U-Patricia Blackmon usekuhlaleni lokufa e-Alabama ngokubulala ngokutsha ngokufa kwintombi yakhe eneminyaka engu-28 ubudala eyamkelwa, iDinququa. U-Blackmon wamkela i-Dominiqua inyanga ezintandathu ngaphambi kokuba abulawe.
NgoMeyi 29, 1999, uPatricia Blackmon, oneminyaka engama-29 ubudala, wabiza i-9-1-1 eDothan, eAlabama kuba intombi yakhe uDibiniqua yayingaphefumli. Xa abagadi be-paramedics befika kwikhaya le-Blackmon, bafumene iDinququa elele phantsi komgumbi wekamelo lokulala - wayegqoke i-diaper kunye neesokisi ezisikiweyo ngegazi, wayegubungele ngamanzi, kwaye wayengaphefumli.
Kwakukho intloko enkulu ebunzini lakhe kunye negazi esifubeni sakhe.
Emva kokuba abagadi be-paramedics bazama ukumvuselela, wathunyelwa kwiSibhedlele seZibhedlele esiPhezulu esiPhezulu apho afela khona emva nje kokufika. Oogqirha ababini, omnye wabo owayengumhlengikazi weDinqua, uDkt. Robert Head, uhlolisise umntwana waza wafumanisa ukuba wayenemivimbo emininzi kunye neengxaki kunye nesigxina sesangu esifubeni sakhe. Baye baphawula amanxeba ambalwa asekudala ku-Dominiqua, ephuma kwalimala kwangaphambili nakwizigaba ezahlukeneyo zokuphilisa.
Kuqulethwe ukulimala okwe-30 emzimbeni wakhe, umhloli wezonyango uDkt. Alfredo Parades wathola imivimbo ehamba phambili kwisifuba sayo esingaphantsi kunye nesisu esiswini kunye nokujikeleza. Kwakhona wayenomthwalo onqabileyo.
Kwakhona wafumanisa ukuba i-Dominiqua yayinamathambo amabini aphukileyo kunye nezinye izinto ezalimaza ezazinzigaba ezahlukeneyo zokuphilisa. Iingqungquthela zaphetha ukuba ukufa kwakhe kungenxa yokulimala kwamandla amaninzi entloko yakhe, esifubeni, kwisisu nangasemva.
Olunye ufumano oluthole kwiDinquququa lwalusigxina sesigqabi esifubeni sakhe esichazwe ngokucacileyo ukuba sasiyifumene kwisithombe esithathwe ngugqirha.
UDkt. James Downs, umhloli ophezulu wezonyango kwi-State of Alabama, wangqina ukuba wayefanisa imifanekiso esathathwa yengubo yokushicilela kwiingcathulo uSommon wayegqoke ngosuku lokubulala.
Kwaye wayecinga ukuba inye yeenqatyambo zihambelana nomxholo obhalwe ngaphakathi esifubeni saseDomininiqua.
U-Downs uthe kwakhona ukholelwa ukuba uDomininia washaywa ngephulo elibangela ukulimala kwangoko.
UWayne Johnson, umkhwenkwe ka-Blackmon umkhwe wabonisa ukuba i-Blackmon yedwa umntu onakekela iDinququa ngobusuku bokubulala, kwada kwada kwafika ixesha labagadi be-paramedics kwikhaya lika-Blackmon malunga ne-9: 30 ebusuku.
UJohnson wangqina ukuba ngobusuku bukaDomininia wabulawa, wabona iDinquququa ekuqaleni kwantambama kwaye wayebonakala enhle, edlala kwaye esenza ngokuqhelekileyo. Wathi uMadmon noDomininiqua bashiya indlu yakhe malunga ne-8 ntambama
Ukukhangela kwekhaya le-Blackmon livule izinto ezininzi ezahlukileyo zegazi. Uvavanyo lwama-forensic lufumene igazi kwi-pool cue, i-T-shirt yengane, ishidi elityinyiweyo lombhede, kunye ne-napkins ezimbini. Igazi elifunyenweyo kuzo zonke izinto zifanelwe negazi likaDomininiqua.
Ekuziphenduleleni kwakhe, u-Blackmon uthe umntwana walimala xa ewela ebhedeni. U-Blackmon wabiza amangqina amanani amaninzi ukuba angqina ngokuzimela kwakhe. UJudy Whatley, umqeshwa weSebe lezoLuntu, wathi ngoluvo lwakhe, i-Blackmon neDomininiqua babe nolwalamano oluhle.
U-Whatley waqhagamshelana no-Dominiqua no-Blackmon kwinyanga enye ezintlanu ngaphambi kuka-Agasti ka-1998. UTammy Freeman, ummelwane wase-Blackmon, wangqina ukuba wayehlala eshiya abantwana bakhe phantsi kokunyamekela kuka-Blackmon.
Ijaji ligwebe uMnyama we-murderous capital . Kuye kwaqhutyelwa ukuvalelwa kweentetho ezihlukeneyo, apho uRhulumente waxhomekeka kwiimeko ezibuhlungu ukuba ukubulala kwakubuhlungu kakhulu, bubuhlungu, okanye bukhohlakele ukuxhasa isigwebo sokufa . Emva kokuvalelwa kwecala lokugweba isigwebo, ngokuvota kwe-10 ukuya kwembini, kucetyiswa isigwebo sokufa.
Ngo-Agasti 2005, i-Blackmon ibhenele enkundleni, ixela ukuba u-Rhulumente akahluleki ukubonakalisa ukuba ukubulala kwakubaluleke kakhulu, bubuhlungu, bubuhlungu, okanye bukhohlakele xa kuthelekiswa nokubulawa kwamanye amakhulu. Watsho ukuba u-Rhulumente akahluleki ukubonisa ukuba u-Dominiqua wayeyazi ngexesha lokuhlaselwa kunye nokuba wayehluphekile.
U-Blackmon wayekholelwa ukuba iDominqua yayingenakunceda ngaphambi kokuba uBlackmon ambethe, kwaye ngenxa yoko, umntwana akazange abe neentlungu zokubetha. Isibheno sakhe saphenduliwe.
U Patricia Blackmon uhleli ekhosini lokufa eTutwiler Ijele labaseTyhini e-Wetumpka, Alabama.
Ukuvumela iiNgxelo kwiRuby kwiRails
I-Customs - Kubaluleka kuMbutho